ဖြူဖွေးတင်းရင်းနေတဲ့ အတွင်းသားဖွေးဖွေးလေးတွေပေါ်အောင် လှရက်လွန်းနေတဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေး ပိုးမမှီသာရဲ့ အလှလေးများ – Real Link
ဖြူဖွေးတင်းရင်းနေတဲ့ အတွင်းသားဖွေးဖွေးလေးတွေပေါ်အောင် လှရက်လွန်းနေတဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေး ပိုးမမှီသာရဲ့ အလှလေးများ
ဒီ တစ်ခေါက် မှာ တော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီ ဆို တဲ့ Music ဗီဒီယို လေး တွေ မှာ ပါဝ င် သရုပ်ဆောင် ရင်း အ နုပညာ လောက ထဲ ရောက်ရှိ ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော လေး ပိုးမမှီသာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမ က တော့ ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ် ပြီး အနုပညာ အလုပ် တွေ လည်း လုပ် ဆောင် နေကာ ယခု ချိန်မှာ တော့ နေရာ တစ်ခု ထိ ရောက်ရှိ အောင်မြင် နေတ ာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ လ တ်တ လော မှာလည်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေ လက်ခံ ရိုက်ကူး နေ ကာ ပရိသတ် တွေ အားပေး ထောက်ခံ မှု ကို အခိုင် အမာ ရရှိထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။
ခန္ဓာ ကိုယ်က လည်း ကျစ် လစ် သွယ်လျ ပြီး အချိုး အစား ညီမျှ နေတာ ကြေ ာင့် ပုရိသ တွေ အကြား ရေပန်း စား ကာ အောင်မြင် နေ တဲ့ သူလေး လည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။။ စကား ပြော ဆို ဟန် က လည်းချစ်စရာ ကေ ာင်းပြီး ဟန် ာင် မှု ကင်းတဲ့ အပြုံးတွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ အားပေး ထောက်ခံ နေ ကြတာ ဆို ရင် လည်း မမှား ပါ ဘူး..။ ယခုအခါ မှာ တော့ အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေး ကာရိုက် ကူး ထား တဲ့ ပုံလေး တွေ ကို သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ ချပြ လာတာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။
မြင်နေကျ ပုံစံ မဟုတ် ပဲ ပိုးမ မှီသာ တစ် ယောက် အထာ ကျကျ မိမိုက် နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဒီပုံလေး တွေ ထဲမှာ ပိုးမမှီသာ ဟာ စွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အပြုံး ညို့အ ား ပြင်း တဲ့ အကြည့် တွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ ရင်ခုန် စေမှာ တော့ အမှန် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ရုပ်ရည် က လည်း ချော မော လှပ နေပြီး နိုင်ငံခြား သူလေးလို ချစ် ဖို့ ကောင်းနေ ကာ ခပ်ဆို းဆိုး ကောင်းမလေး ဟန် ပုံလေး တွေ နဲ့အတူ “ ဘက်စုံထူးချွန် လူ ဇိုးမ အမှတ် တရ …. Thanks for 2M views … ” ဆို တဲ့ ခေါင် လေး တပ် ပြီး ဖော်ပြ လာတာ ကို ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှ ဝေပေး လိုက်တာ ပဲ ဖြ စ်ပါ တယ် နော်…။
ဒီ တစ္ေခါက္ မွာ ေတာ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္ သီ ဆို တဲ့ Music ဗီဒီယို ေလး ေတြ မွာ ပါဝ င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရင္း အ ႏုပညာ ေလာက ထဲ ေရာက္ရွိ ခဲ့တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာ ေလး ပိုးမမွီသာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ သူမ က ေတာ့ ဆရာဝန္ တစ္ဦး ျဖစ္ ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ ေတြ လည္း လုပ္ ေဆာင္ ေနကာ ယခု ခ်ိန္မွာ ေတာ့ ေနရာ တစ္ခု ထိ ေရာက္ရွိ ေအာင္ျမင္ ေနတ ာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ လ တ္တ ေလာ မွာလည္း ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ေတြ လက္ခံ ရိုက္ကူး ေန ကာ ပရိသတ္ ေတြ အားေပး ေထာက္ခံ မႈ ကို အခိုင္ အမာ ရရွိထား တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။
ခႏၶာ ကိုယ္က လည္း က်စ္ လစ္ သြယ္လ် ၿပီး အခ်ိဳး အစား ညီမၽွ ေနတာ ေၾက ာင့္ ပုရိသ ေတြ အၾကား ေရပန္း စား ကာ ေအာင္ျမင္ ေန တဲ့ သူေလး လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။။ စကား ေျပာ ဆို ဟန္ က လည္းခ်စ္စရာ ေက ာင္းၿပီး ဟန္ ာင္ မႈ ကင္းတဲ့ အျပဳံးေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ အားေပး ေထာက္ခံ ေန ၾကတာ ဆို ရင္ လည္း မမွား ပါ ဘူး..။ ယခုအခါ မွာ ေတာ့ အထာ က်က် ပို႔စ္ေပး ကာရိုက္ ကူး ထား တဲ့ ပုံေလး ေတြ ကို သူမရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ခ်ၿပ လာတာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။
ျမင္ေနက် ပုံစံ မဟုတ္ ပဲ ပိုးမ မွီသာ တစ္ ေယာက္ အထာ က်က် မိမိုက္ ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ဒီပုံေလး ေတြ ထဲမွာ ပိုးမမွီသာ ဟာ စြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အျပဳံး ညိဳ႕အ ား ျပင္း တဲ့ အၾကည့္ ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ ရင္ခုန္ ေစမွာ ေတာ့ အမွန္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ႐ုပ္ရည္ က လည္း ေခ်ာ ေမာ လွပ ေနၿပီး နိုင္ငံျခား သူေလးလို ခ်စ္ ဖို႔ ေကာင္းေန ကာ ခပ္ဆို းဆိုး ေကာင္းမေလး ဟန္ ပုံေလး ေတြ နဲ႔အတူ “ ဘက္စုံထူးခၽြန္ လူ ဇိုးမ အမွတ္ တရ …. Thanks for 2M views … ” ဆို တဲ့ ေခါင္ ေလး တပ္ ၿပီး ေဖာ္ၿပ လာတာ ကို ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွ ေဝေပး လိုက္တာ ပဲ ၿဖ စ္ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post ကြွေချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် အသဲယားစရာ အမူအရာလေးတွေနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ TIK TOK လေး
Next post ရင်ဖိုဖွယ် အရှိတ်အကောက်လေးတွေနဲ့ တင်းကိတ်လှပနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်နူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ